म पिनटेरेस्टको साथ कसरी सफल हुन सक्छु? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 332
पिन्टेरेस्ट आज एक मञ्च हो जसले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको भविष्यको परियोजनाहरू प्राप्त गर्न चाहान्छन् भनेर उनीहरूको उत्तम र सपना देखाउन अनुमति दिन्छ। यी सबैका लागि लगनशीलता प्रदर्शन आवश्यक छ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, टीमवर्कले काम गर्दछ सफलताको अनिवार्य माध्यमको रूपमा।
जे होस् अन्य प्लेटफर्मले तपाईंलाई कुनै पनि पृष्ठमा कम्तिमा १० सेकेन्डको भिडियोमा देखा पर्न भन्छ, पिन्टरेस्टमा विपरित हुन्छ। नेटवर्कमा सफल हुन चासो भएका मानिसहरूले गर्न सक्ने एउटा चीज भनेको समुदायको लागि अवसर र विचारहरू सिर्जना गर्नु हो।
व्यक्ति जो पिन्टेरेस्टमा विकल्पहरू हेर्छन् उनीहरू आफैंमा उत्तम देखिन्छन् तिनीहरूको घर मर्मत गर्न, कार्यस्थलहरू र निजी परियोजनाहरू सुरू गर्न पनि। यी सबैको लागि धन्यवाद, प्लेटफर्ममा देखिने सबै कुरा लागू गरिनेछ।
Pinterest मा सफल
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो देखाए Pinterest एक उत्तम प्लेटफार्म हो त्यो हो कि आज प्रयोगकर्ताहरूको सपना र विचारहरू पूरा गर्न। यसको निर्माण पछि, यो अरू सञ्जालहरू जस्तो नहुने र यसका बाबजुद, भविष्यमा समस्याहरूबाट जोगिन संघर्षको ध्यान नदिईकन सक्षम भएको छ।
यस पटक, तपाइँ पिन्टेरेस्ट र के मा सबै भन्दा माथि के गरियो को गुणवत्ता सुधार गर्न को लागी केहि को बारे मा जान्न को लागी, तपाइँ कसरी सबै रचनात्मक सामग्री को मजा लिन को लागी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
अन्य नेटवर्कहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक हुनुहोस्
कुन गतिविधिहरू Pinterest मा सुरू हुन्छ र सबै भन्दा माथि, छविहरू उनीहरूले विकास गर्नुपर्दछ, यसमा राख्नु राम्रो विचार हो। जडान कुञ्जीहरूको अपरेशन।
यस अवसरले अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै नयाँ सामग्रीहरू हेर्नको लागि स्वागत गर्दछ कि तिनीहरू ठीक समयमा दिनुपर्दछ। थप रूपमा, राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न विज्ञापनहरू सबै समयमा र स्थानहरूमा आइपुग्छन्।
तपाइँको URL लाई अनुकूलित गर्नुहोस्
यदि तपाईं अन्य मानिसहरूलाई खोजी ईन्जिनहरूमा फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले राम्रो परिणामहरू पाउन URL परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यहाँबाट, व्यक्तिहरूसँग पूर्ण हुनेछ तपाइँको पिन्टेरेस्ट प्लेटफर्ममा कहिँ पनि प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाईंको छवि वर्णन गर्नुहोस्
जब एक बोर्ड सिर्जना, वा केवल नयाँ पिन बनाउँदा यो अत्यधिक आवश्यक छ कि तपाईंले वर्णन राख्नु पर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईं कहाँबाट आउनुभएको हो भनेर जान्न मद्दत पुर्‍याउँछ र तपाईं जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ वरिपरि रमेश नगरी र उनीहरूलाई के चाहिन्छ वा के प्राप्त गर्दैन भनेर।
यो कार्यान्वयन गर्न पनि एक राम्रो विचार हो सबै SEO ज्ञान जुन तपाईं प्राप्त गर्न वा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। निस्सन्देह, यसको लागि धन्यवाद, अधिक व्यक्तिहरूले तपाईंलाई प्लेटफर्ममा फेला पार्न सक्छन्।
Pinterest मा के नगर्ने?
अब, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ के चीजहरू Pinterest मा भाग लिन योग्य छैनन्।
तपाईंले Pinterest मा अश्लील वा संवेदनशील छवि पोष्ट गर्नुहुन्न
तपाईं प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरूलाई अपमान गर्न सक्नुहुन्न
यो आवश्यक छ कि तपाइँले सबै सन्देशहरूको जवाफ Pinterest भित्र पठाउनुभयो
साझेदारी गर्नका लागि पिनहरू राम्रो संगठनको लागि बोर्डमा हुनुपर्दछ
गतिविधिहरु थाहा पाउन तपाईको खाता निरन्तर समीक्षा गरिने छ
1 Pinterest मा सफल
1.1 अन्य नेटवर्कहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक हुनुहोस्
1.2 तपाइँको URL लाई अनुकूलित गर्नुहोस्
1.3 तपाईंको छवि वर्णन गर्नुहोस्
2 Pinterest मा के नगर्ने?